गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ-डा. भीमार्जुन आचार्य - Yatra Daily
Home समाचार गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ-डा. भीमार्जुन आचार्य
आलोचनात्मकरूपमा हेर्दा यो संविधान अलि अनौठो खालको दस्तावेज पनि छ । संविधान बन्दा संविधानसभामा राष्ट्रवादी शक्तिको उपस्थिति थियो । तथापि तीन वटा दल–एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको वर्चस्व थियो । उहाँहरूले संविधानमा यति कुरा काङ्ग्रेसको र यति कुरा कम्युनिष्टको राखेर संविधानलाई उँट जस्तो बनाउनुभयो । संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादमा आधारित समाज’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । संविधानको धारा–४ मा ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने शब्द उल्लेख छ । ‘समाजवादउन्मुख’ र ‘समाजवादमा आधारित’ भनेका फरक कुरा हुन् ।
संविधानमा लेखिने एउटा अल्पविराम र पूर्णविरामको पनि अर्थ हुन्छ । संविधान जारी भएपछि कम्प्युटरमा यस्तो गल्ती भयो, मानवीय त्रुटि भयो भन्न पाउन हुन्न । त्यसमा जे लेखियो, त्यो प्रावधान मानिनेछ । त्यसलाई बाध्यकारी मानिन्छ । समाजवादमा आधारित, समाजवादउन्मुख हुँदै धारा ५० उपधारा ३ मा नेपाली समाज समाजवादउन्मुख हुने तर स्वतन्त्र र खुला हुने भनी लेखिएको छ । खुला र स्वतन्त्र भन्ने शब्द काङ्गे्रसको लागि राखियो अनि कम्युनिस्टको लागि समाजवाद राखियो । यस्ता खालका परस्परविरोधी कुरा संविधानमा अनगिन्ती छन् । त्यसो हुँदा हुँदै पनि त्यसमा लेखिएका प्रावधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी रह्यौँ । त्यो स्वाभाविक थियो । सामाजिक र आर्थिक न्यायको कुरा जुन लेखिएको थियो, त्यो पूरा भएन ।
दुर्भाग्य आफूलाई समाजवादी र क्रान्तिकारी भन्ने व्यक्तिहरू शासनमा भएको समयमा यी सब भइरहेका छन् । आर्थिक समृद्धिको आश्वासन पनि पूरा हुन नसक्दा चार वर्षमा संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गर्नुप¥यो ।
संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने आदि कुरा उल्लेख छ । संविधानले सरकारमाथि निगरानी राख्न १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । सात वटा विभिन्न समुदायसँग सम्बन्धित आयोग छन् । १३ वटा आयोगमध्ये चार वटा आयोगमा आजसम्म पनि पदाधिकारी छैनन् । संविधान बनेको चार वर्ष भयो । के यो अर्को बदमासी होइन ? ५–६ वटा आयोगमा आजको दिनमा एक एक जना पदाधिकारीमात्र छन् । संवैधानिक आयोगको एकतिहाइभन्दा बढी पदाधिकारी रिक्त छन् ।
भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति नै गरिंदैन । यो देशको एक जना सक्षम नागरिकले यदि ठूला दलसँग लसपस छैन भने उसको क्षमताले यहाँ कुनै अवसर पाउँदैन । शासक दलले सम्पूर्णरूपमा नागरिकको अवहेलना गरिरहेको छ । ठूला दलभित्र पनि इमानदारले कुनै अवसर पाउँदैनन् । मुठिभरले मात्र त्यस्तो फाइदा लुटिरहेका छन् । नागरिक भएर बाँच्छु भन्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने क्षमता सरकारको छैन । एक्लै लुट्ने एक्लै खाने प्रवृत्ति छ । अनि कसरी नागरिकले संविधानप्रति सम्मान गर्छन् ?
अहिलेको संविधानमा चार कुराबाहेक सबै कुरा संशोधनीय छन् । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधीनता र जनताको सार्वभौम अधिकारबाहेक सबै कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ । कुनै कुरा सकिन्न भने खारेज गरौँ । कानुन व्यवसायीको हिसाबले त सङ्घीय व्यवस्था भनेको स्वर्णिम व्यवस्था हो जहाँ मुद्दै मुद्दा र तनावै तनावमात्र हुन्छ । यो संविधान जारी भएपछि अदालतमा ३५ प्रतिशत मुद्दा वृद्धि भएको छ ।
त्यसको एउटै कारण हो सङ्घीयता । तर, नागरिकको लागि कस्तो हो, तपाइँ भोगिरहनुभएको छ । यो फालौँ भन्ने मेरो आशय होइन । यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनुस्, सक्नुहुन्न भने सच्याउनुस् । जनतालाई ढाँट्ने र छकाउने काम गर्न पाइँदैन । आशा गरौँ, अर्को असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउँदा स्वतः स्फूर्त संविधान दिवस मनाउने वातावरण बनोस् ।
Previous article२६ सय प्रहरी सई, असई र हवल्दारको सरुवा
Next articleपर्साको सिमा नाकाबाट व्यापक रुपमा तस्करी, तस्करहरुबाट पैसा लिने जिम्मा टाईगर टोलीको !